Safal Khabar - ४ वर्षसम्म आफ्नो घरमा जान नपाएका अन्तरजातीय जोडीको प्रश्न : प्रेम गर्नु पाप हो र ?
४ वर्षसम्म आफ्नो घरमा जान नपाएका अन्तरजातीय जोडीको प्रश्न : प्रेम गर्नु पाप हो र ?
बिहिबार, २६ असार २०७६, १३ : ०२
प्रहरीले पनि उमेर पुगेका केटाकेटीको मनचित्त लागेर बिहे गरे अरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न आग्रह ग¥यो, तर माइतीपक्षकाले मिलापत्र गर्न मानेनन् फर्केर गए । गाउँ गए उनीहरुको सम्बन्धविच्छेद गराउने र जतिखेर पनि आक्रमण हुनसक्ने डरले आफूहरु गाउँ जान नसकेको गणेशले बताउनुभयो । गाउँकै शिवपुरी माध्यामिक विद्यालयमा दुवै अध्ययन गर्थे । ११ कक्षा दुवै पास भयौँ तर, १२ कक्षाको परीक्षा दिन पाएनाँै गणेशले भने “१२ कक्षाको परीक्षा आवेदन फारम भरे पनि माइतीपक्षको धम्कीका कारण परीक्षा दिन पाएनाँै ।” गाउँमै रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत उनीहरु माइतीपक्षको धम्कीका कारण दुईपटक परीक्षा छुटाइसकेका छन् । विद्यालयले स्थानान्तरणसमेत नगरिदिएपछि उच्च शिक्षा पढ्ने धोको पूरा हुननसकेको उनले गुनासो गरे । सदरमुकाममा खान बस्न समस्या भएपछि गणेशले ज्याला मजदुरी गर्छन् भने ज्योतिले सदरमुकाममै सानो घुम्तीमा खुद्रा पसल राखेकी छन् । “जेनतेन गुजरा चलेको छ”, गणेशले भने, “गाउँमा जान पाएको भए खेतीकिसानी गरेर जहान केटाकेटी पाल्थे अहिले म साह्रै समस्यामा छु ।” यस अवधिमा उनीहरुका दुई छोरीको जन्मसमेत भइसकेको छ । तर अझै पनि माइतीपक्षको मन पग्लिएको छैन ।
“अरु हामीलाई मतलव छैन । हाम्रो छोरी मरीसकी । तिनीहरु फर्केर हाम्रो गाउँमा नआउन, आए राम्रो हँुदैन भन्नुहुन्छ रे बाबामम्मीले मैले के बिगारेकी छु र ? प्रेम गर्नु पाप हो र ?” ज्योतिले भनिन्, “अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जातभातको कुरा गरेर मलाई सामाजिक बहिष्कार गरे । म के गरुँ ।”(रासस)